Nhau - Kune hunyanzvi hwekutenga vanofamba nevacheche. Nyanzvi dzichakudzidzisa nzira yekusarudza nekutenga ngoro dzevana nenzira kwayo
Tarisa pane chigadzirwa chigadzirwa uye chengetedzo, ipa iro rine chiremera kwazvo kuburitswa kwemhando yepamusoro, masisitimu ehunyanzvi ekuyedza, danho repamusoro redudziro yehunyanzvi, kugadzira hupenyu hwemhando yepamusoro Saka vatengi vanofanira kutenga sei vanokwanisa uye vari nyore kushandisa vanofamba?
Mutori wenhau akaitisa mabvunzurudzo asina kujairika mune mamwe masupamaketi, uye vagari vazhinji vakati chakanyanya kukosha kucherechedza pakutenga vana vanofamba-famba hunhu uye kugadzikana kwezvigadzirwa.
Mutengi Nie akaudza vatori venhau kuti chekutanga ivhiri. Iye anofunga inofanirwa kuve iyo inorwisa-skid imwe. Ipapo zvinonyanya kusununguka kugara nekurara pasi, kwevana. Dzimwe mota dzakawandisa kumashure uye muchiuno, kunyanya kana dzakarara. Zvirinani kuve nemakusheni pasi pawo.
Asi mutengi Mai Li anofunga, iyo yekutenga yemwana yekutakura kazhinji inotanga kuve yakasununguka, mwana, yakasununguka chimiro. Kugara zvakanaka. Ingo pusha mwana.
“Tinofanira kutarisisa dambudziko remhando yepamusoro. Mutengo unonzwisisika, mhando iri nani, uye kuita kwemutengo kwakakwira. Chinhu chakatarwa ndechekuteerera kuchengetedzeka, chinofanirwa kuve chakasimba, mwana akagara pairi hazvisi nyore kudonha. ”Mutengi Mai Wang vakadaro.
Nyanzvi dzakaudza vatori venhau kuti vabereki vanofanira kutanga kune zvese zvichienderana nemazera evana akasiyana kuti vatenge zvinofamba.
Mutengesi wevacheche mutengesi Zhang Ying akaudza vatori venhau kuti kana ari mwana achangozvarwa, anofanirwa kuve anoshanda-akawanda, akarara kumusana uye akagara pamota inoshanda-yakawanda, inobatsira mukukura kwevana. Mushure memwedzi mitanhatu, nzvimbo yacho ichave yakakura. Unogona kusarudza kugara wega pane kurara pasi, nekuti ane hope shoma panguva iyoyo. Zvino kana iri rinenge gore rimwe chete, chinja kuita tricycle diki, inogona kukwira inogona kugara, ichiwedzera kukura kwevana.
Nyanzvi dzakati dzakanaka dzakanaka ngoro dzevana hadzina mitsetse yakapinza, matipi uye protrusions munzvimbo dzinowanikwa vana. Panguva imwecheteyo, kumwe kuputika kunofanirwa kuve nenzvimbo dzekudzivirira dzakadai semabhandi ekuchengetedza uye mapanji echipanji.
“Sevana, havateereri uye vanotarisa-tarisa mumotokari. Kana pasina bhandi rekuchengetedza, zviri nyore kuti mwana adonhe kubva mumotokari. Kunyangwe paine bhandi rechipanji pachigaro chebhandi chinongedzo chinoshandiswa zvakare kuchengetedza. Kana iri yakasimba, kana yakasununguka, uye iri nyore kuvhura, inovawo nehunhu hune simba pamuviri wemwana Heze City Indasitiri neCommerce Bureau kodzero dzevatengi uye nhengo yekuchengetedza chikamu nhengo Shan Liang akadaro.
Nyanzvi dzinotenda kuti vabereki vanofanirwa kuyedza zvakanyanya pa-saiti kuti vaone kana muviri wemotokari wakasimba uye kutakura huremu hwemuviri. Iyo inorema muviri, ndiyo yakasimba uye yakachengeteka. Panguva imwecheteyo, vhiri remutakuri wecheche rinofanirwa kuve nekukatyamara kufema, braking uye mamwe mabasa.